Home Wararka Rooble oo ka jawaabay qoraalkii ka soo baxay Villa Soomaaliya
Rooble oo ka jawaabay qoraalkii ka soo baxay Villa Soomaaliya
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa jawaab ku bixiyey tallaabadii ugu dambeysay ee uu qaaday madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday oo shaaciyey inuu shaqo joojin ku sameeyey Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka, kadib eedeymo uu u jeediyey.
Rooble oo ka jawaabay go’aankaasi ayaa marka hore Farmaajo ku tilmaamay madaxweyne hore, wuxuuna sheegay in tallaabada uu qaaday ay baal-marsan tahay sharuucda dalka. Sidoo kale wuxuu shaaca ka qaadau in Farmaajo uu bilaabay inuu awood ciidan kula wareego xafiiskiisa, isagoo ka digay dhaq-dhaqaaqyada haatan ka socda Villa Soomaaliya.
“Warka ka soo baxay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee khuseeya shaqada Ra’iisul Wasaaraha iyo isku daygiisa in uu ciidan kula wareego xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, waa tallaabooyin baal marsan dastuurka iyo sharciyada dalka,” ayuu yiri.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sidoo kale xusay in wixii mas’uuliyad ah ee ka dhashay waxa haatan socda uu qaado madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. “Mas’uuliyadda wixii ka dhashana waxaa qaadaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,” ayuu yiri Rooble,” ayuu sii raaciyey ra’iisul wasaaruhu.
Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay ra’iisul wasaaraha inuu sii wadi doono waajibaadka loo igmaday, isaga oo shaaciyey in uusan cidna uga hebeysan doonin. “Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu sidii caadiga ahayd u wataa shaqo maalmeedkiisii, waxaana ka go’an in uusan cidna uga heybeysan gudashada waajibaadkiisa Qaran, si uu dalka u gaarsiiyo doorasho horseedda in awoodda lagula kala wareego si nabad ah,” ayuu yiri.
Previous articleWaa maxay qorshaha Farmaajo ee shaqo ka joojinta taliyaha Ciiddanka Badda?
Next articleFarmaajo suspends PM as US, UK call for credible, rapid conclusion
Culimada Islaamka oo qiyaano ku tilmaantay hishiiska Baxrayn & israil
Gudoomiyaha Xisbiga Himilo Qaran oo sheegay in uu Shariif kabadbaaday Qorshe...